Vaovao - Momba ny fampiasana rindran-damina fandraketana fandaminana ary zavatra mila dinihina
1. Atsofohy ao anaty fanary ny tavy mametraka cassette voasoratra eo ny tarehimarika vita amin'ny kofehy, sarony ny boaty mandemana (vy tsy misy fangarony), ary atsofohy ao anaty sobika mandranitra ao anaty masinina mandrehitra na mandreraka azy manokana.
2.Tehirizo ao anaty sosona ambany amin'ny lafaoro (na amina sosona misaraka) ny farany ambany.
3.Mandritra ny fametahana azy dia apetraka ao anaty lafaoro iray ihany ilay tavy nesorina niaraka tamin'ny harona tsy ampy rano ary maty ny farany ambany. Vohay ny saron'ny boaty misy ny dewatering, apetraho eo akaikiny ny sarony, safidio ny bobongolo ao ambany mifangaro arakaraka ny haben'ny vatan'ny sela, afana amin'ny jiro misy alikaola miaraka amin'ny tweezers, fehezo ny vatan'ny sela ary apetaho ao anaty lasitra eo ambany, ary fonony izany miaraka amin'ilay boaty natsofoka natsipy niaraka tamin'ny laharan'ny blaogy voasoratra teo amin'ilay tavy tsy ampy rano, manary savoka paraffin kely, mba tsy hihoatra ny rano, ary avelao izy mandritra ny fotoana fohy.
4.Avoahy ao anaty vata fampangatsiahana ny boaty gilasy, apetraho ao anaty boaty gilasy ny vongan-savoka napetraka ary apetaho mandritra ny 5 min10 min. Fotoana fohy amin'ny ririnina ary lava kokoa amin'ny fahavaratra.
5.Tnapetrany ny bobongolo ambany ary ny fonony boaty tsy mihosin-dra dia nalamina ary natsofoka tao anaty lafaoro mba hiatrehany. Ny fonosana boaty tsy ampy rano dia atsofoka ao anaty harona tsy mihombo, ary ny savoka dia azo esorina amin'ny rano mafana alohan'ny hampiasana manaraka.
Ity fomba ity dia tsy vitan'ny hoe mitahiry ny fitehirizana ny savoka, fa mamonjy parafin koa.
(1) Ny fonon'ny fanary mametraka cassette dia ahitana boaty tsy fahampiana rano.
(2) Raha tsy misy vata fampangatsiahana dia azo apetraka amin'ny hafanan'ny efitrano mandritra ny fotoana lava kokoa ilay vongan-tsavoka vao namboarina sy ny bobongolo ambany, ary azo esorina amin'ny bobongolo any ambanin'ny bobongolo ny savoka.
Huida dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny famokarana sy fanodinana ny mametraka cassette ary fenitra avo lenta amin'ny indostria. Manankarena ny tsipika vokatra ary afaka mihaona amin'ny ankamaroan'ny rindranasa fanandramana cassette. Tongava ary mifidiana ny vokatra mety ho an'ny fampiharana andranao.